Oovimba be-Brent-Funda ukurhweba
Imfuno yeoyile ekrwada kunye noNikezelo lweeCaps zokungalingani kwangaphambili
Ukuhlaziywa: 26 January 2021
Amaxabiso eoyile aluhlaza ayamanyana ngokudibanisa iinyanga ezili-11 eziphakamileyo. Emva kokubhabha malunga neepesenti ezingama-20 ukusuka kumhla ophantsi kaMatshi, ukunyuka okuphezulu kubonakala ngathi kubuthathaka. Abahwebi baya bexhalaba ngakumbi malunga nembonakalo yemfuno, enokuthi yenzakaliswe kukuphinda kuvele kwamatyala e-coronavirus e-China. Ngaphandle kwecala, unikezelo lwexesha elifutshane kunye noqikelelo lwebango lubonisa ukuba umngcipheko ucalanye kwicala eliphantsi.
Ukuvuselelwa kwamatyala e-coronavirus e-China kwiiveki ezikhokelela kumnyhadala woNyaka oMtsha kunokulwenza buthathaka ubizo kumthengi weoyile yesibini. Idatha iphakamisa ukuba ukuhamba ukuya nokubuya kwizixeko zaseTshayina kuye kwamodareyitha ukusukela ekuqaleni kukaDisemba, malunga -6% ngaphantsi kwamanqanaba angaphambi kobhubhane.
Urhulumente wase-China uxele i-793 yamatyala amatsha kwiveki ephelileyo, ukusuka kuma-300 kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Ngelixa idatha yaseTshayina ihlala ihambelana neengxaki ngokuchaneka nokungafihli nto, eli lelona nani liphezulu kwiinyanga ezili-10. Amanyathelo okwahlulahlula anyuke nabantu abazizigidi ezili-11 eShijiazhuang, ikomkhulu lephondo kumantla eHebei.
Ngeli xesha, ngaphezulu kwesigidi se-5 sabantu abagcinwe eSuihua kwiphondo lase-Heilongjiang. Amanyathelo angqingqwa okubekwa bucala anganciphisa ukugcwala kunye nomsebenzi wezoqoqosho, ngokwenza njalo kunciphise ibango leoyile ekrwada kunye neemveliso zepetroleum.
Ixabiso leoyile ekrwada lithambisa njengeebhere kunye neenkunzi zeenkomo
Amaxabiso eoyile aluhlaza ithambile njengoko idola lomelezekile ngelixa amanyathelo akutshanje eTshayina eza kubangela umonakalo kuhambo loNyaka oMtsha. Imfuno yeoyile e-China ingumbindi wokubuyiselwa kwamaxabiso ngoku, ke nayiphi na imiqobo enzulu kufuneka ibeke uxinzelelo kwintengiso ye-Brent kunye ne-WTI ekrwada.
Amagqabantshintshi ethembiso lika-Nobhala-Jikelele we-OPEC uBarkindo kwinkomfa ye-IPEC yaseIran alinampembelelo kumaxabiso eoyile. UBarkindo ukhumbuze abathengisi bamandla ukuba eyona nto imbi kwintengiso yeoyile yehlabathi iphelile kwaye notyalo-mali kwi-oyile lwehlile ngama-30% ngo-2020. Amagqabantshintshi amangalisayo awenzileyo kukuba inqanaba lokusasazeka kwintsholongwane liza kuqhubeka nokucotha. UBarkindo wanamathela kwimeko kwaye akazange anikezele ngolunye ulwazi olutsha kumbono wemfuno.
Uphuhliso olubalulekileyo kwicandelo lezamandla yayisisigqibo se-S & P Global Ratings sokubeka phantsi koqwalaselo olubi uninzi lweenkampani ezinkulu zeoyile ezifana ne-Exxon kunye neRoyal Dutch Shell. Iiarhente zokulinganisa zihlala zifike emva kwexesha kwaye esi silumkiso sibonakala ngathi kudala sidlulile.